အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Joe Biden အနိုင်ရကြောင်း မီဒီယာတွေက ကြေညာလိုက်အပြီး အောင်ပွဲခံနေသူအချို့။ (နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၀)
အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့နေရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်ရမယ့် နောက်ဆုံးအဆင့်ကို လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့မှာ ပုံမှန်အတိုင်း အခမ်းအနားနဲ့ လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲမသမာမှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်တွေကို တရားရုံးက ပယ်ချထားတာကြောင့် ဒီအပေါ်မှာ ပြင်ပကနေလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Steve Redish သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုရန်နိုင် တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Joe Biden ဟာ သူ အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်နဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမယ့် လမ်းကြောင်းမှာ နောက် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်ကလည်း သူ ၂ ကြိမ် ကြုံထားတာကြောင့်ပါ။ ပထမတကြိမ်ကတော့ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီက ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တကြိမ်ကတော့ နောက် ၄ နှစ်အကြာ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပေးထားတဲ့ ဒုသမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတိုင်း ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ၂ ရပ်ရဲ့ သဘာပတိအဖြစ်နဲ့ ပြည်နယ် ၅၀ က ချိတ်ပိတ်ပြီး ပေးပို့လိုက်တဲ့ ကော်မရှင်မဲတွေကို ဖွင့်ပြီး ရေတွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
“နယူးယောက်ပြည်နယ်က Donald Trump က အမေရိကန်သမ္မတနေရာအတွက် ကိုယ်စားလှယ်မဲ ၃၀၄ မဲ ရရှိပါတယ်။”
အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ ပြင်ဆင်ချက် အမှတ် ၁၂ မှာတော့ လက်ရှိဒုသမ္မတရဲ့ တာဝန်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော် ၂ ရပ် ပူးတွဲရှိနေချိန်မှာ အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ သဘာပတိအဖြစ်ရှိနေတဲ့ ဒု-သမ္မတအနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်မဲတွေ အားလုံးကို ဖွင့်ပြီးတော့ ရေတွက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုဓဥပဒေ အခန်း ၃ ပုဒ်မခွဲ ၁၅ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်မဲတွေကို ရေတွက်ခြင်းဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီဥပဒေက ၁၈၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၄၈ မှာ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ စနစ်တကျ စီစဉ်ပေါင်းစုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအရ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီမှာ အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ၂ ရပ်ကို သဘာပတိအဖြစ် ဦးဆောင်ကျင်းပပြီး ပြည်နယ် ၅၀ က ကိုယ်စားလှယ်မဲတွေ ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ စာအိတ်တွေကို ဖွင့်ပြီး အက္ခရာစဉ်အလိုက် ရေတွက်သွားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဥပဒေပုဒ်မ အပိုဒ်ခွဲ ၁၅ အရတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ပြည်နယ်တခုချင်းစီရဲ့ မဲရေတွက်မှုကို ကန့်ကွက်ဖို့ အခွင့်အရေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင် စာရေးသားပြီး ကန့်ကွက်ရမှာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးတော့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်တို့ လက်မှတ်ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Joe Biden - “ဒီကန့်ကွက်မှုက စာရေးကန့်ကွက်တာလား? ပြီးတော့ အောက်လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကရော လက်မှတ်ထိုးထားပါသလား။”
House Member - “သဘာပတိခင်ဗျား၊ ဒါက စာရေးကန့်ကွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်လွှတ်တော်အမတ်က လက်မှတ်ထိုးထားပေမယ့် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကတော့ မထိုးထားရသေးပါဘူး။”
Joe Biden - “ဒါဆိုရင် ဒီကန့်ကွက်မှု အထမမြောက်ပါဘူး။”
၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းကတော့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အတွက် ကော်မရှင်မဲ ရေတွက်မှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ဒါဟာ သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Cheney - “ဒီကန့်ကွက်မှုကို အထက်လွှတ်တော်အမတ်က လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလား။”
Tubbs - “ဒီကန့်ကွက်လွှာကို အထက်လွှတ်တော်အမတ်က လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်။”
Cheney - “ဒါက စာရေးကန့်ကွက်တာဖြစ်ပြီး အောက်လွှတ်တော်နဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၂ ယောက်စလုံးကလည်း လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အတွက် ဒါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုဓဥပဒေ အခန်း ၁ ပုဒ်မ ၃ နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။”
အဲဒီလိုဆိုရင် လွှတ်တော် ၂ ရပ်စလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အသီးသီးကို ပြန်သွားကြပြီး ၂ နာရီထက်မပိုဘဲ အချေအတင် ဆွေးနွေးကြပြီး ကန့်ကွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဲခွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က “ကျနော်တို့ရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့ လိမ်ညာပြီးတော့ မဲမသမာမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
မဲခိုးတယ်လို့ သက်သေအထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲ သမ္မတ Trump က ပြောနေချိန်မှာပဲ ဒီ ကော်မရှင်မဲ ရေတွက်မှုကို သဘာပတိအဖြစ် လုပ်ရမှာက သူ့ရဲ့ ဒု-သမ္မတ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်မဲ ရေတွက်မှုအရတော့ ၂၀၂၀ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Joe Biden အနိုင်ရတယ်လို့ ကြေညာထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလုပ်မယ့် မဲရေတွက်မှုကိုတော့ လွှတ်တော်တခုဆီက အနည်းဆုံး အမတ် ၁ ယောက်စီက ကန့်ကွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး အလာဘားမားပြည်နယ် ရီပတ်ဘလစ်ကန် အောက်လွှတ်တော်အမတ် Mo Brooks နဲ့ မစ်ဇူရီပြည်နယ်က အထက်လွှတ်တော်အမတ် Josh Hawley တို့က သူတို့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အောက်လွှတ်တော်မှာတော့ ဒီမိုကရက်တွေက လူများစုဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီကန့်ကွက်မှု အဆိုကတော့ ရှုံးနိမ့်ဖို့ အလားအလာ များနေပါတယ်။
ကနျသမ်မတ ရှေးကောကျပှဲ ကိုယျစားလှယျမဲကို ကှနျဂရကျရှမှေ့ောကျ ရတှေကျမညျ
အမရေိကနျသမ်မတ ရှေးကောကျတငျမွှောကျတဲ့နရောမှာ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ လုပျဆောငျရမယျ့ နောကျဆုံးအဆငျ့ကို လာမယျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ဇနျနဝါရီ ၆ ရကျနမှေ့ာ ပုံမှနျအတိုငျး အခမျးအနားနဲ့ လုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မဲမသမာမှုတှေ ရှိတယျဆိုတဲ့ စှဲခကျြတှကေို တရားရုံးက ပယျခထြားတာကွောငျ့ ဒီအပျေါမှာ ပွငျပကနလေညျး စိတျဝငျတစားနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နကွေပါတယျ။ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ Steve Redish သတငျးပေးပို့ထားတာကို ကိုရနျနိုငျ တငျပွပေးထားပါတယျ။
Joe Biden ဟာ သူ အမရေိကနျသမ်မတအဖွဈနဲ့ ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုမယျ့ လမျးကွောငျးမှာ နောကျ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာကို သိနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အရငျကလညျး သူ ၂ ကွိမျ ကွုံထားတာကွောငျ့ပါ။ ပထမတကွိမျကတော့ ၂၀၁၃ ဇနျနဝါရီက ဖွဈပါတယျ။ နောကျတကွိမျကတော့ နောကျ ၄ နှဈအကွာ ၂၀၁၇ ဇနျနဝါရီလ ၆ ရကျနမှေ့ာ ဖွဈပါတယျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေ ပေးထားတဲ့ ဒုသမ်မတရဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာအတိုငျး ကှနျဂရကျလှတျတျော ၂ ရပျရဲ့ သဘာပတိအဖွဈနဲ့ ပွညျနယျ ၅၀ က ခြိတျပိတျပွီး ပေးပို့လိုကျတဲ့ ကျောမရှငျမဲတှကေို ဖှငျ့ပွီး ရတှေကျရတာဖွဈပါတယျ။
“နယူးယောကျပွညျနယျက Donald Trump က အမရေိကနျသမ်မတနရောအတှကျ ကိုယျစားလှယျမဲ ၃၀၄ မဲ ရရှိပါတယျ။”
အမရေိကနျဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒရေဲ့ ပွငျဆငျခကျြ အမှတျ ၁၂ မှာတော့ လကျရှိဒုသမ်မတရဲ့ တာဝနျတှကေို ဖျောပွထားပါတယျ။ အမရေိကနျ အထကျလှတျတျောနဲ့ အောကျလှတျတျော ၂ ရပျ ပူးတှဲရှိနခြေိနျမှာ အထကျလှတျတျောရဲ့ သဘာပတိအဖွဈရှိနတေဲ့ ဒု-သမ်မတအနနေဲ့ ကိုယျစားလှယျမဲတှေ အားလုံးကို ဖှငျ့ပွီးတော့ ရတှေကျရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါတှကေို ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျလိုလုပျမယျဆိုတာကို အမရေိကနျပွညျထောငျစု ကိုဓဥပဒေ အခနျး ၃ ပုဒျမခှဲ ၁၅ ကှနျဂရကျလှတျတျောမှာ ကိုယျစားလှယျမဲတှကေို ရတှေကျခွငျးဆိုပွီး ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒီဥပဒကေ ၁၈၈၇ ခုနှဈကတညျးက ရှိလာခဲ့တာဖွဈပွီး ၁၉၄၈ မှာ ပွငျဆငျပွီးတော့ စနဈတကြ စီစဉျပေါငျးစုထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဥပဒအေရ ဇနျနဝါရီ ၆ ရကျနေ့ နလေ့ယျ ၁ နာရီမှာ အထကျလှတျတျောရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌက ကှနျဂရကျလှတျတျော ၂ ရပျကို သဘာပတိအဖွဈ ဦးဆောငျကငျြးပပွီး ပွညျနယျ ၅၀ က ကိုယျစားလှယျမဲတှေ ခြိတျပိတျထားတဲ့ စာအိတျတှကေို ဖှငျ့ပွီး အက်ခရာစဉျအလိုကျ ရတှေကျသှားဖို့ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီဥပဒပေုဒျမ အပိုဒျခှဲ ၁၅ အရတော့ အဖှဲ့ဝငျတှအေနနေဲ့ ပွညျနယျတခုခငျြးစီရဲ့ မဲရတှေကျမှုကို ကနျ့ကှကျဖို့ အခှငျ့အရေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ကနျ့ကှကျမယျဆိုရငျ စာရေးသားပွီး ကနျ့ကှကျရမှာဖွဈပွီး အနညျးဆုံးတော့ အထကျလှတျတျောအမတျတယောကျနဲ့ အောကျလှတျတျောအမတျတယောကျတို့ လကျမှတျထိုးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Joe Biden - “ဒီကနျ့ကှကျမှုက စာရေးကနျ့ကှကျတာလား? ပွီးတော့ အောကျလှတျတျောအမတျနဲ့ အထကျလှတျတျောအမတျတှကေရော လကျမှတျထိုးထားပါသလား။”
House Member - “သဘာပတိခငျဗြား၊ ဒါက စာရေးကနျ့ကှကျတာ ဖွဈပါတယျ။ အောကျလှတျတျောအမတျက လကျမှတျထိုးထားပမေယျ့ အထကျလှတျတျောအမတျကတော့ မထိုးထားရသေးပါဘူး။”
Joe Biden - “ဒါဆိုရငျ ဒီကနျ့ကှကျမှု အထမမွောကျပါဘူး။”
၂၀၀၅ ခုနှဈတုနျးကတော့ သတျမှတျခကျြနဲ့ ကိုကျညီမှုရှိတဲ့အတှကျ ကျောမရှငျမဲ ရတှေကျမှုကို ယာယီရပျဆိုငျးလိုကျပွီး ဒါဟာ သမိုငျးတလြှောကျမှာ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ရပျဆိုငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Cheney - “ဒီကနျ့ကှကျမှုကို အထကျလှတျတျောအမတျက လကျမှတျထိုးပွီးပွီလား။”
Tubbs - “ဒီကနျ့ကှကျလှာကို အထကျလှတျတျောအမတျက လကျမှတျထိုးထားပါတယျ။”
Cheney - “ဒါက စာရေးကနျ့ကှကျတာဖွဈပွီး အောကျလှတျတျောနဲ့ အထကျလှတျတျောအမတျ ၂ ယောကျစလုံးကလညျး လကျမှတျထိုးထားတဲ့အတှကျ ဒါက အမရေိကနျပွညျထောငျစု ကိုဓဥပဒေ အခနျး ၁ ပုဒျမ ၃ နဲ့ ကိုကျညီမှုရှိပါတယျ။”
အဲဒီလိုဆိုရငျ လှတျတျော ၂ ရပျစလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ သကျဆိုငျရာ လှတျတျောအသီးသီးကို ပွနျသှားကွပွီး ၂ နာရီထကျမပိုဘဲ အခအြေတငျ ဆှေးနှေးကွပွီး ကနျ့ကှကျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး မဲခှဲကွတာဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျသမ်မတ Donald Trump က “ကနြျောတို့ရဲ့သမ်မတရှေးကောကျပှဲကို သူတို့ လိမျညာပွီးတော့ မဲမသမာမှုတှေ လုပျခဲ့ပါတယျ။” လို့ ပွောပါတယျ။
မဲခိုးတယျလို့ သကျသအေထောကျအထား ခိုငျခိုငျမာမာမရှိဘဲ သမ်မတ Trump က ပွောနခြေိနျမှာပဲ ဒီ ကျောမရှငျမဲ ရတှေကျမှုကို သဘာပတိအဖွဈ လုပျရမှာက သူ့ရဲ့ ဒု-သမ်မတ ဖွဈပါတယျ။ ကျောမရှငျမဲ ရတှေကျမှုအရတော့ ၂၀၂၀ သမ်မတရှေးကောကျပှဲမှာ Joe Biden အနိုငျရတယျလို့ ကွညောထားတာ ဖွဈပါတယျ။
လာမယျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာလုပျမယျ့ မဲရတှေကျမှုကိုတော့ လှတျတျောတခုဆီက အနညျးဆုံး အမတျ ၁ ယောကျစီက ကနျ့ကှကျဖို့ ပွငျဆငျနပွေီး အလာဘားမားပွညျနယျ ရီပတျဘလဈကနျ အောကျလှတျတျောအမတျ Mo Brooks နဲ့ မဈဇူရီပွညျနယျက အထကျလှတျတျောအမတျ Josh Hawley တို့က သူတို့အနနေဲ့ ကနျ့ကှကျဖို့ ပွငျဆငျနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
အောကျလှတျတျောမှာတော့ ဒီမိုကရကျတှကေ လူမြားစုဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီကနျ့ကှကျမှု အဆိုကတော့ ရှုံးနိမျ့ဖို့ အလားအလာ မြားနပေါတယျ။
သမ္မတရွေးချယ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ နောက်ဆုံးအဆင့်
“ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပြောင်းရန်မရှိ” မီရှီဂန် ရီပတ်ဘလီကန်ခေါင်းဆောင်များ